omaly tetsy amin'ny Lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Tsy noho ny fahamaroan'ny olona ihany fa dia nizara ny mamy sy ny fifaliana ho an`ny mpankafy ny Tarika AmbondronA. Noporofoin-dry zalahy hatrany ny maha ngeza azy eo amin’ny tontolon’ny mozika. Tsy vitsy ireo tonga namaly ny antso satria ny alarobia mialoha ny andron`ny fampisehoana dia lany tanteraka ny tapakila. Tafaray tokoa ny tia sy ny manina toy ny fihaonan`ny tarika amin`ny mpankafy azy hatramin`izay satria dia horakoraka hatrany ny an`ny mpankafy toa efa niandry fatratra ity taona ity. Seho nakotrokotroka nifanomezan-dry Kix sy ny ekipany tamin` ity famaranana ny taona 2019 ity. Hita hatrany fa mbola mafy ny fifamatorana eo amin`ny tarika sy ny mpankafy, izay hita feno fifaliana tanteraka, nanaraka tsy an-kiato ireo rehetra nentina an-tsehatra. Anisan`ny nankasitrahan`ny maro manokana, omaly, ny nitondrana an-tsehatra indray ireo hiran`ny tarika nampalaza azy tany am-piandohany. Niara-dalana tamin`ny famoahana ilay rakikira fahafito ny hetsika “Ho soa hatrany”ny fampisehoana. Amin`ny taona 2020 kosa vao hifamotoana amin`ny mpijery etsy amin`ny Coliseum Antsonjombe ny tarika.